Yakanakisa China inogadzira akasiyana saizi tambo hex musoro ivhu kongiri sikuruu chinamira bhaudhi Mugadziri uye Fekitori | Kuchenjera
Kuti ubatanidze zvikamu zvinobatanidza maviri kuburikidza nemakomba.
Chechipiri, kushandiswa kwehexagonal flange bolts
Musoro wehexagonal flange bolt ine zvikamu zviviri: iwo musoro wakaenzana uye iwo flange pamusoro. Yayo "nzvimbo yekutsigira kusvika padanho renzvimbo" yakakura kudarika iya yakajairika makona mabhaudhi emusoro, saka mhando iyi ye bolt inogona kumira yakasimba pre-kuomesa simba uye kudzivirira Iyo yakasununguka mashandiro yakanakawo, saka inoshandiswa zvakanyanya mumotokari dzemota, inorema michina nezvimwe zvigadzirwa. Hexagon musoro mabhaudhi ane maburi uye akasvinwa mumusoro. Kana ikashandiswa, mabhaudhi anogona kukiyiwa zvinehunyanzvi kudzivirira kusununguka.
Tatu, iyo yakakosha kupatsanura ye flange bolts
1. Hexagon musoro sikuruu bhaudhi ine buri
Pini yakatsemurwa gomba inoitwa pane sikuru kuti ipfuure nepaburi resimbi, iro rinosunungurwa, uye kusunungura kunovimbika
2. hexagon musoro yakadzorerwa mabhaudhi
Zvipfigiso zvine reamed maburi anogona kunyatso gadzirisa iyo yakawiriranwa chinzvimbo chakabatanidzwa zvikamu, uye inogona kumira shear uye extrusion munzira ino tenderera
3. kuyambuka recessed hexagon musoro mabhaudhi
Nyore kuisa uye sungisa, inonyanya kushandiswa kumwenje indasitiri, chiridzwa uye mita ine diki mutoro
4. sikweya musoro bhaudhi
Musoro wedivi une hukuru hwakakura uye hombe inotakura pamusoro, izvo zviri nyore kuti chipanera chimise musoro wayo kana kuvimba nezvimwe zvikamu kudzivirira kutenderera. Inogona zvakare kushandiswa muzvikamu neT-slots kugadzirisa iyo bhaudhi nzvimbo. Kirasi C mativi emusoro mabhaudhi anowanzo shandiswa pane zvakasimba zvivakwa
5. mabhaudhi akavharirwa
Square mutsipa kana tenon ine basa rekumisa kutenderera, uye inowanzo shandiswa mune dzimwe nguva apo pamusoro pezvikamu zvakabatana zvinofanirwa kuve zvakapfava kana zvakatsetseka.
6. T-slot bhaudhi
T-slot mabhaudhi akakodzera pazviitiko apo mabhaudhi anogona kungobatanidzwa kubva kune rumwe rutivi rwezvikamu zvakabatana. Mushure mekunge bhaudhi yaiswa muT-slot uye yobva yatenderera madhigirii makumi mapfumbamwe, bhaudhi haigone kudhonzwa; inogona zvakare kushandiswa mune dzimwe nguva apo chimiro chinodiwa kuti chiumbike.
7. Anchor bolts anoshandiswa zvakanyanya kune pre-yakavigwa kongiri nheyo kugadzirisa zvigadziko zvemachina nemidziyo.
Ivo anonyanya kushandiswa kwenzvimbo uye zvishandiso izvo zvinofanirwa kudzimwa kazhinji.
8. Yakakwira-simba mabhaudhi emabhaudhi edenderedzwa majoini eakaomarara grid furemu
Simba repamusoro, rinonyanya kushandiswa mumigwagwa mikuru uye njanji, zvivakwa zveindasitiri uye zveveruzhinji, shongwe, cranes.
Iyo yekutanga kupatsanurwa kweanoverengeka nyowani hexagonal flange bolts inonyatso kuziviswa pamusoro. Izvi zvinogadzirwa zvinoenderana nezvazvino zvinodiwa pamusika uye vane yavo chaiyo yekushandisa zviitiko. Semuenzaniso, T-slot mabhaudhi anogona kunyatsobatanidzwa nemhando dzakasiyana. Panguva imwecheteyo, izvi zvikamu uye zvinoriumba zvinogona zvakare kushandiswa semunhu akazvimiririra, senge chikamu chimwe nechimwe kana kubatana mune njanji, iyo inogona kufambiswa zvakasununguka, kuitira kudzivirira mapfundo akafa mukubatana uye kukanganisa ramangwana kugadziriswa nekushanda. Inoshandiswa zvakanyanya muhukama mune yakaomesesa maindasitiri nharaunda.
Pashure: kemikari anchor bhaudhi
Zvadaro: 304 316 Stainless Simbi Wedge Anchor Kuwedzera Bolts Nemutengo Wakanakisisa
Kongiri Bolt Screw
Kongiri Bolt Screw Anchor
304 316 Stainless Steel Wedge Anchor Kuwedzera ...